Ngingakwazi ukusebenzisa cefazolin izingane?
Cefazolin libhekisela eqenjini antimicrobial isenzo elwa namagciwane. Igama ezivamile iqembu - cephalosporins.
Lesi sidakamizwa kabanzi for ekwelapheni izifo ezifana nenyumoniya, ukucinana kwemigudu yokuphefumula obstructive, peritonitis, osteomyelitis. Futhi, ngempumelelo besebenzisa lolu izidakamizwa ekwelapheni izifo urogenital kanye nezifo zesikhumba.
Cefazolin ukusetshenziswa sasivumela chithi saka Pediatrics. Okwamanje, izibhedlela eziningi ubeke umjovo ne izidakamizwa "Cefazolin" abantwana abangeniswe umnyango ezithathelwanayo bephethwe izifo ezihlukahlukene.
Kukholakala ukuthi izidakamizwa kuqhathaniswa non-enobuthi kahle eliphezulu Imininingwane. Nokho, ngokuvumelana contra-kukhonjisiwe imiyalelo, uma ingane yakho ingaphansi inyanga eyodwa ubudala, ukusetshenziswa kwezidakamizwa akuvunyelwe. Ngakho-ke, cefazolin izingane (imijovo) iqondiswa ngemuva kwesikhathi ezisanda kuzalwa.
It bavunyelwe ukusebenzisa izidakamizwa njengenhlangano ngemithambo yegazi noma intramuscularly. Uma esibhedlela, udokotela ukuba khona imithi izilinganiso yena imithi ukutshala izidakamizwa. Esimweni lapho ukuphathwa uchitha ekhaya, nquma ukuthi ngeke angene tsefozalin umzimba - ngemithambo yegazi noma ngomjovo. It kuncike lolu hlobo umenzeli kuka cefazolin buhlanjululwe.
Uma ufuna ukusebenzisa izidakamizwa ngemithambo yegazi, umuthi kungenziwa buhlanjululwe ekhethekile kuphela amanzi umjovo. Kuleso simo, uma uya ukujova phakathi buttock, hlambulula izidakamizwa noma nge amanzi umjovo noma procaine noma lidocaine.
Izingane yokwelapha kumelwe niqaphelisise. Imijovo wenza ngokuqinile ngaphansi kweso lwezokwelapha, ngoba hhayi iqedwe komzimba nezinto izidakamizwa. Ochwepheshe ukweluleka hhayi ukusebenzisa Novocain ngokuzalanisa futhi esimweni ukuqokwa izidakamizwa ezifana cefazolin, izingane ukwenza kangcono watshala kuso noma lidocaine noma amanzi umjovo.
Nge ezithile komzimba okufana njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile, isicanucanu, ukuhlanza, dysbacteriosis kubalulekile amahora ambalwa abheke ukusabela, ikakhulukazi uma i-antibiotic ezinjalo kuba cefazolin, izingane.
Isenzo zomuthi eside ngokwanele, kuba amahora angu-8 ngemva kokuba abaphathi. Lokukhipha kuyinto cishe enjalo ngokusebenzisa uhlelo excretory zomzimba.
Ukuze uvikele izitshalo emathunjini izinguquko elihlobene ne yokwamukela i nokulungiselela elwa namagciwane, kanyekanye ukuqala imithi yokwelapha Yiqiniso equkethe lactobacilli. Nge ukwethulwa izidakamizwa "Cefazolin" izingane zingakwazi predlozhitrebenku (noma izingane, uma abantu abambalwa sigule) imithi efana bifiform, wenza zona ngokukhethekile nokuba bumnandi, noma Atsipol.
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi cefazolin ekhiqizwa amaphilisi. Ngeshwa, izidakamizwa ikhishwe kuphela powder senzelwe umjovo. Kodwa kunezinye izidakamizwa cephalosporin iqembu, okuyinto ingatholakala inethiwekhi ekhemisi ungaphakathi ifomu tablet. Ngokwesibonelo, cephalexin, esetshenziswa ekulweni staphylococci futhi streptococci. It is kabanzi ekwelapheni izifo ezifana salmonella.
Omunye umuthi olwa namagciwane elisetshenziswa amaphilisi, nokuba yingxenye yalelo qembu elifanayo - tsefuraksim acetyl. Umuthi isivele isizukulwane sesibili. Ddozirovka udokotela sawo esimisiwe kuncike eminyakeni yobudala lesiguli kanye kobukhulu isifo.
Khumbula ukuthi konke antibiotic, kanye ushintsho komunye naphakathi kwenye lufanele lwenteke kulamazinga lalandzelako ngokuqinile ngokuhambisana udokotela enquma, ngingenzi self-ukwelashwa.
Granulocytes - Iyini? Granulocytes egazini: iyokhushulwa, kwehlisa izinga
Uma Earache yengane, yini okufanele uyenze? Kanjani ukunikeza usizo oluphuthumayo?
Distrofik - ubani lo? sokuwohloka
"Teddy" (juice): Ukwakheka kanye nokubuyekeza
Indlela uzenza fan
Ukunqoba uGenghis Khan. Iminyaka yokuhamba kwakhe futhi wokubusa uGenghis Khan. mashi zikaGenghis Khan eRussia
Incwadi ka-Dkt Myasnikov "Rust"
Derek Prince - umhlaziyi weBhayibheli
I-Owl Harry Potter. Wayengubani igama lakhe?
Gianni Rodari - nombhali "The Adventures of Chipollino"